စုစည်းထားသည့်အသုံးချနုိင်မှုရင်းမြစ်များ - ASSIST ASEAN - အာဆီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ကုန်သွယ်ရေး ဖြေရှင်းနည်းလမ်းများ
ဤစုစည်းထားသည့် အသုံးချနိုင်မှု ရင်းမြစ်များ (Toolkit) ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံ၏ ဖြေရှင်းနည်းများ သုိ့မဟုတ် ‘ASSIST’ အတွက် ရည်ရွယ်၍ အမျိုးသား ဆက်သွယ်ရေး တာဝန်ခံများ သို့မဟုတ် ပင်မတာဝန်ခံများအဖြစ် လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်ပေးခြင်း ခံရသောသူများဖြစ်သည့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ အစိုးရအရာရှိများ အတွက် သော်လည်းကောင်း၊ အာဆီယံဒေသတွင်း နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ကုန်သွယ်ရေး ပြဿနာများနှင့် စပ်လျဥ်း၍ အာဆီယံ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ် ပြောဆိုရာတွင် သို့မဟုတ် တိုင်ချက်တစ်ခုကို စွဲချက်တင်ရန် ASSIST ကို မည်သို့အသုံးပြုပုံကို သင်ကြားမှုစာရွက်စာတမ်းများ အပြည့်အစုံဖြင့် ASSIST အား အသုံးပြုနိုင်ခြေများမည့်သူများကို သင်ကြားပြသပေးရန်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ကိုယ်စားလှယ်များအတွက်ကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
ASSIST ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ နိုင်ငံတော်အဆင့်ဖြင့် အချို့သော ဒေသတွင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီမှုများကို အလေးထားလုိက်ပါဆောင်ရွက်ရာတွင်၊ သို့မဟုတ် ပေါင်းစည်းမှု ယန္တရားများ ပြည့်ဝစွာ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်မှု မရှိသေးခြင်းအပေါ် အလေးထားပူပန်မှု သို့မဟုတ် ပြဿနာရပ်များကို ထုတ်ဖော်ခြင်း၊ ဒေသတွင်း ဝန်ဆောင်မှုများ၊ သို့မဟုတ် ကုန်စည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေး နှင့်ပတ်သက်သည့် အတားအဆီးများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော ကုန်သွယ်ရေး ပြဿနာများ၊ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ၊ အကောက်ခွန် မဟုတ်သော အတားအဆီးများ၊ အကောက်ခွန်မဟုတ်သော စီမံဆောင်ရွက်ချက်များ တစ်ခုခုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရန် အာဆီယံ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ များအတွက် ရိုးရှင်းသော နည်းလမ်းတစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် ASSIST သည် အာဆီယံ စီးပွားရေးအသိုက်အဝန်း (AEC) မူဘောင် အတွင်းနှင့်၊ အာဆီယံ စီးပွားရေး သဘောတူညီချက်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ကုန်စည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေးတုိ့၏ အာဆီယံ ေဒသတွင်း နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ကိစ္စရပ်များ၏ တိုင်တန်းချက်များကိုသာ လက်ခံပေးနေသည်။
ဤစုစည်းထားသည့် အသုံးချနိုင်မှု ရင်းမြစ် (Toolkit)သည် အာဆီယံဒေသတွင်း ကုန်သွယ်ရေး လျင်မြန်လွယ်ကူ ချောမွေ့စေရေးနှင့် စီးပွားရေး ပေါင်းစည်းချိတ်ဆက်မှု ကို ပံ့ပိုးရန် ဥရောပသမဂ္ဂမှ ငွေကြေး ပံ့ပိုးထားသည့် စီမံကိန်း တစ်ခုဖြစ်သော ဥရောပသမဂ္ဂ (ARRISE Plus) ၏ အာဆီယံဒေသတွင်း ပေါင်းစည်း ချိတ်ဆက်ခြင်းဆိုင်ရာ စီမံကိန်းမှတဆင့် ပံ့ပုိးရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤရေးဆွဲထားသည့် (Toolkit)သည် အာဆီယံ အကြီးတန်း စီးပွားရေးဆုိင်ရာအစုိးရအရာရှိများ၏ အစည်းအဝေး (SEOM) နှင့် အာဆီယံ ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ လျင်မြန်လွယ်ကူ ချေမွေ့စေရေး ပူးတွဲ ညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီ (ATF-JCC) တို့၏ တောင်းဆိုချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။
၁. PowerPoint ဥပမာများဖြင့်တင်ဆက် ပြသခြင်း - PowerPoint တွင်ရှင်းပြထားသည်မှာ ASSIST၏ အကြောင်းအရာနှင့် ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ (စတင်ဖြစ်တည်ပုံ၊ ဥပဒေအခြေခံ အကြောင်းအရာများ၊ လွမ်းခြုံသည့်အတိုင်းအတာ၊ အဓိက ပါဝင်သူများနှင့် အဓိက လုပ်ငန်းဆောင်တာများ)၊ နှင့် ASSIST ၏ ယန္တရားနှင့် ၎င်း၏ဆက်စပ်လုပ်ဆောင်မှု အချိန်ဇယားကို ရိုးရှင်းသော ြဖစ်စဉ်သရုပ်ပြပုံစံ ကားချပ်ဖြင့် ASSIST လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်စဉ်ကို ပြသထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၂.
၂. ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍအတွက် ASSIST အသုံးပြုပုံ လက်စွဲစာအုပ် - လက်စွဲစာအုပ်ထဲတွင် အာဆီယံ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ (သို့မဟုတ်) အာဆီယံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုများအတွက် အခကြေးငွေမယူသော၊ အွန်လိုင်းအခြေခံ၊ စည်းနှောင်ထားမှုမရှိသည့် ASSIST အတိုင်ပင်ခံ ယန္တရား၏ လမ်းညွှန်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။
၃. ASSIST လေ့လာမှု သင်ခန်းစာများ - အသုံးပြုသူများ ASSIST၏ ယန္တရားနှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု ရှိစေရန်အတွက်၊ တဆင့်ပြီးတဆင့် ဖြစ်စဉ်လေ့လာမှု သင်ခန်းစာ(၅)မျိုးသည် ASSIST အသုံးပြုပုံ၊ လက်စွဲစာအုပ်အတွင်း၌ ဖော်ပြထားသည့် ဖန်တီးယူထားသော ဖြစ်စဉ်အကြောင်းအရာများကို အခြေခံ၍ ရေးဆွဲထားပါသည်။ လေ့လာမှုသင်ခန်းစာ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် အသုံးပြုသည့်သူများ ASSIST ၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့် အမျိုးမျိုးသော ပါဝင်လုပ်ဆောင်သူတို့၏ အခန်းကဏ္ဍကို ပိုမိုသိရှိ နားလည်စေရန် ဖြစ်သည်။
လေ့လာမှု သင်ခန်းစာများကို ASSIST ဝက်ဘ်ဆိုဒ် https://assist.asean.org ပေါ်တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။
4. ASSIST ၏ စုစည်းထားေသာရင်းမြစ်များ (ေပါင်းချုပ်)